सिजनकै खराब पदर्शन गर्दै चेल्सी !! ६ खेल पश्चात ह्यामसंग बराबरी!! - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
सिजनकै खराब पदर्शन गर्दै चेल्सी !! ६ खेल पश्चात ह्यामसंग बराबरी!!
जारी प्रिमिएर लिग फुटबल खेलमा आज भएको छैटौ म्याच डे खेल अन्तर्गत वेस्ट ह्याम र चेल्सी भिडेका थिए। भारि ह्याम समर्थक सहित लन्डन स्टेडियममा भएको उक्त खेलमा चेल्सी र ह्यामको खेल बराबरीमा रोकिएको छ।
ह्यामका निम्ति भने चेल्सीलाई ३ अंक बाट रोक्नु नै विजयसरि रहेको थियो। आफ्नै घरेलु मैदान र समर्थक रहेको ह्यामले चेल्सीलाई पूर्ण ९० मिनेट रोक्न सफल भयो। प्रिमिएर लिग खेलको ५ औ खेल पश्चात चेल्सी ह्यामसंग बराबरी खेल्न पुगेको छ। च्याम्पियन लिगमा नरहेको चेल्सी युरोपा लिगमा आफ्नो जितको खाता खोलिसकेको छ। आजको खेलमा हाजार्डको हर प्रयास नाकाम बनेको थियो साथै युरोपा लिगमा घाइते भएका पेड्रो भने खेलमा मजुत थिएनन्।
छ खेल पश्चातको चेल्सीको यो निकै कम्जोर खेलको रुपमा लिन सकिन्छ। बौर्नीमाउथ, साथै वोल्फ्स लगाएतका टिमले समेत यो सिजन ह्यामलाई जित्न सफल भएका थिए भने चेल्सी कुनै खेल न हारी लिग तालिकामा अग्र स्थानमा थियो जो आज ह्यामसंग बराबरी खेल खेल्न पुगे।
सारी- चेल्सीका कोच यस नतिजालाइ लिएर निकै स्तब्द रहेका छन। निकै जित र उमिद बोकेका सारीलाई यो खेल निकै कम्जोर रहेको मान्छन। कारबो कपको खेल यही २७ तारिकमा लिभरपूलसंग हुदै छ। यो नतिजा र खेलले लिभरपूलसंग टिक्न सक्ने सम्भावनालाई समेत कम्जोर बनाएको छ।
७२ प्रतिसत बल पोसेसन बोकेको चेल्सीले पूर्ण खेलमा १७ प्रहार गरेको थियो जसमा कुनै गोल हुन सकेकन साथै निकै सुनौला गोल अवसर दुवै टिमले गुमाउन पुगेका थिए।
यस खेलसंगै चेल्सी १६ अंकको साथ प्रिमिएर लिग अंक तालिकाको तेस्रो स्थानमा रहको छ। लिभरपूल र म्यानचेस्टर सिटी भने पहिलो र दोस्रो स्थानमा रहेका छन्। सिटीले समेत एक खेल बराबरी खेलको छ तर प्रिमिएर लिगमा लिभरपूलले भने कुनै खेल न हारी अंक तालिकामा अग्र स्थान ओगटेको छ।
हाल छ खेल सकिदा लिभरपूलले १८ अंक बटुलेको छ। चेल्सी र सिटीको भने १६ १६ रहेको छ। चेल्सीलाई रोक्दै वेस्ट ह्याम ४ अंक बटुलेर १७ औ स्थानमा रहेको छ।
प्रिमिएर लिगको छैटौ म्याच डेको अन्तिम खेल आर्सनल र एबर्टन नेपाली समय ८:४५ मा भिड्दै छन्।